Dil loo geystay Askari saarnaa BL magaalada Muqdisho & dableydii dilka geysatay oo AK47 uu watey horey sii qaatey – idalenews.com
Dil loo geystay Askari saarnaa BL magaalada Muqdisho & dableydii dilka geysatay oo AK47 uu watey horey sii qaatey
Askari ka tirsan ciidamada dowladda ayaa maanta lagu dhex dilay Gaari BL ah, agagaarka Isgoyska Ex Koontarool, iyadoo falkan uu noqday midka ugu hadal heynta badan oo maanta la isla dhex marayay.
Sida ay sheegayaan wararka askariga ayaa ka mid ahaa rakaab gaari BL ah ka soo raacay Isgoyska Fagax ee degmada Yaaqshiid, iyadoo mar uu sii marayay gaariga meel ku dhow Isgoyska Ex Kootarool Balcad ay labo dhalinyaro oo isla rakaabkii gaariga ka mid ahaa ku dhex dileen gaariga.
Rakaabkii saarnaa gaariga ayaa kala cararay markii labada dhalinyaro ee bastoolada watay ay toogteen askariga, kadibna ka qaatay qoriga AK 47 uu watay, waxaana taas keentay in xataa ruuxii darawalka ahaa inuu gaariga ka cararo.
“Maanta agagaarka Ex Koontarool Balcad waxaa ka dhacay dil aad loola yaabay, askari gaari BL ah u soo raacay Suuqa Xoolaha ayaa baabuurka dhexdiisa lagu dilay, labo dhalinyaro ahaayeen qoriga waa ka qaateen xaafadaha ayay ku carareen, gaarigii wadada ayuu ku xayiran yahay, waana lagala kala cararay”ayuu yiri mid ka mid ah dadka degan xaafada Ex Koontarool Balcad.
Dilkan ka dhex dhacay gaariga BL gudihiisa ayaa ahaa mid ku cusub, iyadoo ciidamada mararka qaar iyagoo hubka sita gaadiidka BL-ka la raaca dadka rayidka.
Sanadkii 2008-dii ayaa Askari ka tirsan dowladda oo Timaha loogu jarayay Timo jare ku yaal Isgoyska Sanca ay rag bastoolado ku hubeysan ku dhex dileen halkii timaha loogu jarayay, waxaana Muqdisho sanadihii u dambeeyay caan ku aheyd dhacdooyika falalka kala duwan.
C/laahi Max’ed Idiris “Leesta” & Dr. Max’ed Cali Xaamid oo ugu cad cad musharaxiinta madaxtinimada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Somalia
Xisbiyada AK Party & CHP ee dalka Turkey oo dagaal gacan ka hadal ah ku dhexmarey gudaha barlamaanka dalkaasi